एमसीसी पास गर्छौं भनेर चिठी लेखेको होइन : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एमसीसी पास गर्छौं भनेर चिठी लेखेको होइन : दाहाल
काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्छौं भनेर चिठी नलेखिएको प्रस्ट पारेका छन् ।
ललितपुरको खुमलटारस्थित देउसीभैलो टोलीलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार दाहालले एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति नबनाइ पारित गर्न नसकिने भन्दै थप समयका लागि चिठी लेखेको बताएका हुन् । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा सहभागी भएर स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार दाहाल र आफूले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको बताएका थिए । सोही भनाइको खण्डन गर्दै दाहालले भने राजनीतिक दलहरुसँग छलफल आवश्यक रहेकोबारे चिठी लेखिएको बताएका हुन् ।
'देशमा सबै दलहरुसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाइ हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन । त्यसको निम्ति हामीलाई समय चाहिन्छ । हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ ? त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय निकाल्छौं भनेर लेखिएको चिठी हो,' अध्यक्ष दाहालले प्रस्ट्याउँदै भने, ' हामीले पास गर्छौं भनेर लेखेको चिठी होइन, यो कुरा प्रस्ट होस् ।'
अमेरिका, बेलायत वा विश्वका जुनसुकै देशको सहयोग लिनु सामान्य विषय भन्दै दाहालले एमसीसी संशोधन हुनुपर्ने भनाइ दोहोर्‍याए । 'एमसीसीको ओरिजिनल सहमतिसँग डराउनुपर्ने कुरा छैन । बीचमा थपिएका कुराले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि नै असर पर्ने आमजनतालाई लागिसकेपछि यसलाई संशोधन नगरीकन पास गर्न सकिँदैन,' दाहालको भनाइ थियो ।
उनले अगाडि भनेका थिए, 'एमसीसी सम्झौता हुँदा संसद्‌मा लानु पर्ने, संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नु पर्ने केही कुरा थिएन । अमेरिकाले पैसा दिने र नेपालले लिएर विकास गर्ने भन्नेमात्रै थियो । त्यतिबेला हामी पनि सरकारमा थियौं । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको हो । त्यो सम्झौतामा पार्लियामेन्टमा लगेर ऐनसरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । पछि त्यसमा त्यो थपियो । त्यो भएपछि यसको रहस्य के हो त भन्ने प्रश्न खडा भयो । र, यो विवाद बन्न आएको हो ।'
प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७८ १६:५६
किरात राज्यका अन्तिम राजा हिलिहाङको दरबार संग्रहालय बन्दै
कार्तिक १९, २०७८ लक्ष्मी गौतम
पाँचथर — पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा किरात वंशका अन्तिम राजा हिलिहाङ योङहाङको संग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । तत्कालीन राजा हिलिहाङले शासन गरेको हिलिहाङ ४ स्थित हिलिहाङ दरबारको भग्नावशेष क्षेत्रमा प्यागोडा शैलीमा उक्त संग्रहालय निर्माण हुने बताइएको छ । पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले उक्त संग्रहालयको शिलान्यास गरेका हुन् ।
संघीय सरकार र हिलिहाङ गाउँपालिकाको साझेदारीमा दुई करोड ५१ लाख ६८ हजार ३१८ को लागतमा दरबार निर्माण हुन लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष भुवानी लिङदेनले जानकारी दिए ।
दरबार निर्माण कार्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ७० र हिलिहाङ गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने दरबार निर्माणका इलामको भगवती वौद्ध जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
दरबार निर्माणको काम २०८० साल माघ २५ गतेभित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सोही स्थानमा हिलिहाङ फाउण्डेसनले प्रवेशद्वारसहित दुईवटा सालिक निर्माण गरेका छ ।
विक्रम सम्बत् १७८३ साल कात्तिक १८ गते तत्कालीन योङहाङ राज परिवारमा जन्मिएका हिलिहाङले १८१४ मा राजगद्दी सम्हालेका थिए । नेपाल एकीकरण अभियानमा लागेका पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्वको फौजसँग हिलिहाङ राजाका सेनाले १७ पटक लडाइँ गरेको र हारजित नभएपछि १८३१ साउन २२ गते सम्झौता (लालमोहर) भएको थियो ।
लडाइँ र संघर्षका बीचमा राजा पृथ्वीनाराणय शाह र हिलिहाङ राजाबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक धेरै सन्धि/सम्झौता भएका थिए । सम्झौतामध्ये वि.सं. १८१४, १८३१ र १८४२ मा भएका सन्धि सबैभन्दा बढी चर्चामा थिए । सन्धिअनुसार स्थानीय क्षेत्रका अधिकार हिलिहाङ राजाले सञ्चालन गर्न पाउने र गोर्खालीलाई केन्द्रीय राज्य मान्ने तथा राजाहरूबीच दाजुभाइको सम्बन्ध रहने सन्धि भएको थियो । अर्थात् शाहहरू र योङहाङहरू राजखान्दानी दाजुभाइ रहने गरी नेपाल एकीकरणको खाका कोरिएको इतिहासका जानकार मचिन्द्र योङहाङ बताउँछन् । यस क्षेत्रमा हिलिहाङले ३१ वर्षको उमेरमा वि.सं. १८१४ मा शासन हात लिएर वि.सं. १८१४ देखि १८४२ सम्म २८ वर्ष शासन गरेको इतिहासमा छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७८ १६:४३
रासस–महिला आयोग घरबहालमा किचलो